तिनीहरूले नातिनातिनी हजुरआमा बच्चाहरु भन्दा बढी प्रेम भन्छन्। नातिनातिनी तिनीहरू सबै unspent भावना पोखे। त्यसैले हजुरआमा कुनै कारण लागि कुनै पनि छुट्टी बारेमा नातिनातिनी वा न्यानो शब्दहरूबाट इच्छा सधैं स्वागत छ।
हजुरआमा आफ्नो नातिनातिनी लागि बिदा व्यवस्था गर्न प्रेम। तर न्यानो शब्दहरू भन्दा कम आशा छैन। तिनीहरूले इच्छा शब्दहरू सुन्न खुसी भए। तिनीहरूले ऋण रहनेछ छैनन्। अझ, प्रेम गर्नेछ दिन ध्यान, प्रेम र हेरविचार।
तर कृतज्ञता र इच्छा को शब्द बोल्न सक्ने क्षमता गर्न accustomed गर्न आवश्यक बाल्यकाल देखि। जवान छोराछोरीले जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन र संसारको आफ्नो Majesties राउन्ड बारी बाध्य छैन भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यो हजुरबा हजुरआमाले, आमा र बुबा, मित्र को इच्छा शब्दहरू बोल्न सक्षम हुन महत्त्वपूर्ण छ। बच्चाहरु - स्पंज जस्तै तिनीहरूले अवशोषित सबै दिन हो। यसलाई कृतज्ञ हुन तिनीहरूलाई सिकाउन त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ।
तिनीहरूले राति कथाहरू बताउन जब बच्चाहरु प्रेम। र तिनीहरूले पुरानो पत्नीहरू 'Tales को विशेष गरी रुचाउनु छन्। र नातिनातिनी सिकाउन सकिन्छ भनेर पहिलो शब्दहरू रोचक कथा लागि कृतज्ञता शब्दहरू हुन र शुभ हजुरआमा इच्छा हुनेछ।
कविता वा गद्य?
हजुरआमा - यो अत्याधिकै धन्य नातिनातिनी देखि हरेक न्यानो शब्द वा एक नजर हुनेछ गर्ने व्यक्ति हो। तिनीहरूलाई सुन्न उत्तिकै खुसी हुनेछ - यो सरल शब्दहरू, "! हजुरआमा, आफैलाई हेरचाह" अथवा सिकेका कविता हुन। मुख्य कुरा हो - यो कि छोराछोरीको नजरमा छ निष्कपटता छ।
छोराछोरीको, कल्पना र रचनात्मकता राम्रो विकास छन्। आफूलाई versemonger अक्सर सानो अप आउँदै छोटो कविता, जो मेरो हजुरआमा खुश।
"हजुरआमा, मेरो प्रिय,
यसलाई सधैं सुन्दर छ।
सधैं हँसिलो हुन,
खुसी र स्वस्थ! "
अध्ययन, काम मा संलग्न छन् जो हुर्केपछि नातिनातिनी आफ्नो परिवारको सुन्दर शब्दहरू पाउन सक्नुहुन्छ को हजुरआमा लागि बधाई को पद वा गद्य मा।
हजुरआमा अभिवादन हुनुपर्छ भनेर मुख्य कुरा हो - यो प्राप्त भावना, ध्यान र हेरविचार लागि निष्कपट कृतज्ञता छ स्वास्थ्य, को इच्छा न्यानोपन र जीवनको धेरै खुसी वर्ष।
सानो नातिनातिनी सबै भन्दा राम्रो छ हजुरआमा लागि उपहार तपाईंको आफ्नै हातले बनाएको कार्ड - कुनै पनि छुट्टी लागि। मार्च 8 औं हजुरआमा मा इच्छा रंग गत्ता एक सुन्दर पोस्टकार्ड सजाया, कुनै पनि उपहार भन्दा बढी महंगा छन्। चित्रकला, टालो सजावट, crochet, वा काठ नक्काशी: उमेर संग नातिनातिनी कला नयाँ प्रकार सिक्न। क्रमशः, र वर्ष सुधार "बढ्न अप" हुनेछ, तर एउटै महंगा र मनमोहक रहने भन्दा उपहार।
र नाति केही आय छ भने, तब आफ्नो हजुरआमा उपहार व्यवहार गर्नुपर्छ। यो आवश्यक ध्यान हजुरआमा महत्त्वपूर्ण चिन्ह स्वामित्व महंगा हुन छैन। यो समुद्र वा चकलेट इच्छा एक स्वादिष्ट केक एउटा टिकट हुन सक्छ।
कुनै पनि व्यक्ति को जीवन मा महत्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक मेरो जन्मदिन हो। उमेर बिना - यो एक स्वागत उत्सव हो।
हजुरआमाको जन्मदिन, रेडियो वा टेलिभिजन शो मा भन्न हुनेछ जो उनको मित्र उनको नातिनातिनी प्रेम गर्न बन्द देखाउन एक उत्कृष्ट अवसर हुनेछ इच्छा।
ठूलो कला - टोष्ट बोल्न सक्ने क्षमता। सिक्ने यो पहिलो परिवार छुट्टी गर्न आवश्यक छ सुरु गर्नुहोस्। बच्चाहरु सुन्न र जन्मदिन इच्छा लागि प्रकारको शब्द बोल्न आवश्यक छ। पहिलो प्रयास एक टोष्ट काँतर हुनेछ बनाउन गरौं, तर वर्ष, प्रत्येक नयाँ अवसर तिनीहरूले थप विश्वस्त र सुवक्ता हुनेछ। केही सरल शब्दहरू सुरु हुने, जारी त्यसपछि आफूलाई सिक्न छोराछोरी coherently र सुन्दर बोल्न, राइम्स सिके।
टोस्ट हजुरआमा सरल शब्दहरू हुन सक्छ: "मेरो प्रिय हजुरआमा, तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो र ठूलो आनन्द! र हामी यो मदत गर्नेछ "- वा हृदयस्पर्शी eloquently सजाया:" हजुरआमा - Homemaker र राम्रो-जा। का सधैं पैक र प्रेम र हेरविचार संग न्यानो प्राप्त गर्न सक्छ कि सारा विशाल परिवार पिउन गरौं। " मेरी हजुरआमा को सम्मान मा एक ODE - र तपाईंले राम्रो अभिवादन आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
न्यानो हजुरआमा इच्छा दिन, र त्यो आफ्नो कोमल र प्रेम, मनपर्ने विनम्रता र आफ्नो आँखा मा एक twinkle तपाईंलाई धन्यवाद हुनेछ।
जन्मदिन अभिवादन पद
जादू र स्मरणीय नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या
आफ्नो हातमा चकलेट र inscriptions एक पोस्टर कसरी बनाउने?
लियो। अन्य संकेत अनुकूलता
प्रसिद्ध वचनहरू। सेना, सैनिक, रणनीति बारे Suvorov।
बैथ्लोन राइफल: प्रकार र विशेषताहरु
तरकारी को संरचना। आफ्नो हातले तरकारी को संरचना (फोटो)
प्रकृति र घर मा छेपारो मा फिड
अण्डाकार प्रशिक्षक - प्रयोग, उपलब्धता, विभिन्न
नतिजा र लक्षण। च्याउ विषाक्तता, यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
ई-पुस्तक छानेर: केहि सरल सुझाव